DIGITAL E SIGNATURE | VERACITY ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ? - MiteLar
DIGITAL E SIGNATURE | VERACITY ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
DIGITAL E SIGNATURE | VERACITY
Digital signature ဖန်တီးမှုကို ယခုတရားဝင်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၊အခွန် ဦး စီးဌာန ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ထိုးမည့်အစား ယနေ့ခေတ်တွင် Digital signature အသုံးပြုခြင်းကို အမှန်တကယ် စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ယခင်စာရွက်ထက် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ယခုအချိန်တွင် ပိုမို အသုံးပြုလာသောကြောင့် သတင်း အချက်အလက်များစာရွက်စာတမ်းများကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းရှိလျှင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့စနစ်တွင် သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဟူသော အာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် Digital signature ကို ကုမ္ပဏီတိုင်း၌အသုံးပြုသင့်သည်။
•	ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးသောမူရင်းစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သောစာရွက်စာတမ်းစိစစ်မှုအတွက် Digital Signature Solution ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
•	စက္ကူစာရွက်များအစား ဒစ်ဂျစ်တယ်စာချုပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း ၊ စာရွက်အစား ဖိုင်မှတ်တမ်းစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သောကြောင့် သိမ်းဆည်းမှုအတွက်အဆင်ပြေခြင်း။
• မှာယူသူကို အတည်ပြုနိုင်သော ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူမှုကို တီထွင်ထားခြင်း။
• စာချုပ်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (M-Contract)။
• စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (SharePoint) ဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
စာဝှက်ထားတဲ့စာသားပုံစံဖြင့် “ အီလက်ထရောနစ်” လက်ဗွေ၊ Digital signature သည် လက်မှတ်ထိုးသူကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ငွေပေးငွေယူရှိစာရွက်စာတမ်းနှင့်လုံလုံခြုံခြုံ ဆက်သွယ်ပေးသည်။ Digital signature များသည် အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုအရ အဆင့်မြင့် ELECTRONIC SIGNATURES ရရှိရန်အတွက် INFRASTRUCTURE KEY INFRASTRUCTURE (PKI) ဟုခေါ်သော စံ နှင့် လက်ခံသောပုံစံကို အသုံးပြုသည်။
DIGITAL SIGNATURE ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
•	လက်မှတ်များကို ပုံနှိပ်ပြိး စကန်ဖတ်ခြင်းများကိုရပ်နိုင်ခြင်း။
•	ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ရုံနှင့် မှတ်တမ်းများကို ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
•	စီးပွားရေးအရွယ်အစားတိုင်းအတွက် အချိန်မရွေးနေရာမရွေး မည်သည့်စက်ကိရိယာပေါ်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
•	၎င်းသည်တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး လုံခြုံမှုရှိသည်။
•	၎င်းသည် အေဂျင်စီ၏စာရွက်စာတမ်းအမှန်ဖြစ်ကြောင်း ၁၀၀% အတည်ပြုနိုင်သည်။
•	စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များတည်းဖြတ်ခြင်းကို ၁၀၀% ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည်။
•	စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်အတွက် အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း။
DIGITAL SIGNATURE VS.E-SIGNATURE
DIGITAL SIGNATURE VS. E-SIGNATURE လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ ဒီသဘောတရားနှစ်ခုက ကွဲပြားပါသည်။ နှစ်ခုရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်မှာ
Digital signature သည် စာရွက်စာတမ်းများ လုံခြုံရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးသူများမှ လိုင်စင်ထုတ် ပေးသည်။ Electronic Signature သည် များသောအားဖြင့် လက်မှတ်ထိုးသူနှင့် သဘောတူညီရန် စာချုပ်များနှင့် ဆက်စပ်သည်။ နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်များနှင့်ပတ်သက်မှု အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒါဟာအပိုဆောင်းလုံခြုံရေး features တွေပါရှိသည်။ ၎င်းတွင်လုံခြုံမှုနည်းပါးသည်။
အသုံးများသောဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်များသည် Adobe နှင့် Microsoft တို့ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်များအမျိုးအစားသည်အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်များဖြစ်သည်။
၎င်း၏မြင့်မားသောတိကျမှုကြောင့်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ထက်ပိုလိုအပ်သည်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပေမယ့်လျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချရမှု လျော့နည်း
အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်။ စာချုပ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြပါသည်။
•	E-Tax ငွေတောင်းခံလွှာ
•	E- ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
•	စုဆောင်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့သောအတွင်းပိုင်းစနစ်များကိုပြုလုပ်သောစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခု၊ တည်းဖြတ်ခြင်းမှတားဆီးရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအစီရင်ခံသည်။
•	၎င်းကိုဌာနများနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားအသုံးပြုသော်လည်းတရား ၀ င်သက်ရောက်မှုမရှိစေရ။
•	ငွေတောင်းခံလွှာစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်တရားဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ပုံစံ
•	Chulalongkorn တက္ကသိုလ်မှ လက်ရှိပညာသင်ဆုရလဒ်များကို အတည်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းများ ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။